စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 28/12/2019)
အသစ်ရထားလိုင်းကိုစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်, အဇာဘိုင်ဂျန်ဖုံးအုပ်, ကြက်ဆင်, နှင့်ဂျော်ဂျီယာ. အဆိုပါလိုင်းကျော်ဖုံးလွှမ်း 820 ကီလိုမီတာနှင့်အပြင်ကုန်တင်ပြီးရှိကြတယ် ခရီးသည်တင်ရထား. ပထမဦးစွာ, မျဉ်းရုရှားကကျော်လွှားနေတုန်းဥရောပနှင့်တရုတ်ချိတ်ဆက်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖွစျလိမျ့မညျ. The train will operate from Azerbaijan’s capital Baku and the Georgian capital Tbilisi to the city of Kars in Turley. ထို့အပွငျ, ဒါဟာလျှော့ချပါလိမ့်မယ် ခရီးအချိန် ဥရောပနှင့်တရုတ်အကြား. အဇာဘိုင်ဂျန်၏သမ္မတ, ကြက်ဆင်, နှင့်ဂျော်ဂျီယာ, အဖြစ်ကောင်းစွာဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်, အသစ်ကမီးရထားလိုင်း၏အဖွင့်သို့တက်ရောက်.
ပထမဦးစွာ, ရထားလိုင်းကိုမူလအတွက်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ် 2010 ပြီးတော့ 2012. သို့သျောလညျး, ကြောင့်အာမေးနီးယားဖြတ်သန်းမလိုင်းကိုရန်, အမေရိကန်နှင့်အီးယူနှစ်ဦးစလုံးငွေရေးကြေးရေးအထောက်အကူမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ဒီနှောင့်နှေးစေသော. ဖြည့်စွက်ကာ, မျဉ်းယခင်က၎င်းတို့၏ခဲ့သောနိုင်ငံများကတဆင့်ဝင် နယ်စပ် တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှပိတ်ထား (ပြန်မှချိန်းတွေ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ).
ကာဇက်စတန်ယခုအသစ်က '' ပိုးလမ်းမကြီးအဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်ထားပါတယ်’ ဥရောပနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအကြားက၎င်း၏တိုးမြှင့ကုန်တင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ. သမိုင်းကြောင်းအကာဇက်စတန်ဥရောပများအတွက်ဆက်သွယ်ပြည်နယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, အာရှတိုက်, နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ. ကာဇက်စတန်ကုန်တင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတစ်ကျော့ပြန်လာရှိခဲ့သည်အကြောင်းပြချက်ကအာရှကဥရောပများ၏အကွာအဝေးလျှော့ချဖြစ်ပါတယ် 10,000 ကီလိုမီတာ. ထို့အပွငျ, ကာဇက်စတန်ကျော်သုံးစွဲထားပြီး $3 ယင်း၏ရထားလမ်းလိုင်းများပေါ်တွင်ဘီလီယံအထိ. ဤသည်တို့ပါဝင်သည် $250 ယင်းအပေါ်သုံးစွဲသန်း Khorgos Gateway မှာ. ဤသည်တံခါးပေါက်တရုတ်ရထားလိုင်းများကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ချက်ကိုရှောင်ရှားဥရောပရထားရန်၎င်း၏ကုန်ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြု.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/new-train-links-asia-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)